Apple iri kutumira maemail nemakodhi ekukupa iwe yemahara mwedzi paApple Music | Ndinobva mac
Apple iri kutumira maemail nemakodhi ekukupa iwe yemahara mwedzi paApple Music
Iwe unoverenga nemazvo, kana chero nguva iwe uchinyorerwa kune Apple mimhanzi yekushambadzira sevhisi, iyo Apple Music Uye nekuda kwechikonzero chipi zvacho chawakamira kuve, Apple iri kutora vanonyoresa zvakare nenzira yakanaka kwazvo.
Apple iri kutumira maemail makuru kune vese vaimbove vanyori kuitira kuti, ikozvino Apple Music yakagadzirwazve uye panguva imwechete mazuva eKisimusi ari kuuya, vape iwo mukana wekudzoka kunyoreswa kwavo nechipo chidiki.
Masikati ano ndakagamuchira email kubva kuna Apple pachayo ichitaura pamusoro peinotevera:
Dzimwe nguva isu tese tinoda kuzorora, asi iwe uchirasikirwa zvakanyanya mukati Apple Music kusanganisira dhizaini yakapusa kuti uwane mimhanzi yaunofarira zvakanyanya uye uwane kuti chii chitsva.
Edza zvakare kwemwedzi wemahara pasina chisungo. Shandisa iyi yakakosha kodhi *************** uye uwane iyo nyowani Apple Music. Kurumidza nekuti kodhi yako inopera musi waZvita 31. **
Yangu yekutanga yekuita yaive yekushamisika uye ichokwadi kuti ndanga ndichiyedza iyo Spotify sevhisi kwemwedzi mishoma kuti ndikwanise kuenzanisa uye ndakanga ndazvinyoresa kubva kuApple Music. Ipapo, ini ndakadzvanya pane iyi link mune iyo tsamba uye yakandiendesa kuTunes Store, kwandakakwanisa kubaya pakudzora kodhi uye whoosh! iyo system inondiudza kuti Apple iri kundipa kunyorera mwedzi uye izvo kubva ipapo ndichafanirwa kubhadhara 9,99 euros pamwedzi kana ndikasakanzura kunyoreswa zuva rekubhadhara risati rasvika.
Teerera kune yako email inbox, nekuti kana iwe ukateerana nemamiriro eApple, iwe unogashira unogamuchira email yakafanana kana iwe usati watogamuchira kare
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Apple iri kutumira maemail nemakodhi ekukupa iwe yemahara mwedzi paApple Music
Zvakanaka, ndakagamuchira iyo email asi ndisina chikamu chavanondipa mwedzi ..., ndakatora mukana weye-3-mwedzi kutongwa kwekuyedzwa panguva iyoyo asi handina kuzombobhadhara, pamwe ndosaka?
Ndakaigamuchira nezuro uye ndanyorera. Iye zvino ndinopokana kuti ndopfuurira nekunyorera here mushure menguva yekutongwa, kana kwete. Ini ndinofungidzira kuti zvinoenderana nekuti ndinoishandisa zvakadii mukati memwedzi uno. Uye ini handina kubhadhara basa racho chero nguva; Ini ndaingova nemwedzi mitatu yemahara yekuyedza ...
ITunes uye Apple Music kuWindows Chitoro Kunonoka
Inonyanya kufarirwa yeApple Music iyi 2017 muSpain ndeiyi: Ed Sheeran, Luis Fonsi naJoaquín Sabina